Yuwa Man Nepal | नेपाल VLIP.LV
सदस्यता लिनुहोस् 400,000
Welcome to our channel "Yuwa Man Nepal". Our goal is to provide the news about local, national and international burning issue,entertainment politics & support from being abuse,humiliating & being victim.I humbly request you to subscribe and Watch our All Videos and please don't copy our videos.Beside it, you can give us feedback for our daily videos.
युवतीले झुठो आरोप लगाइन् भन्दै भारतीय सेना मिडियामा, गर्भ नरहेको खुल्यो रहस्य !
बुढेसकालमा घर फर्कदा श्रीमती अर्कोसँग टाप कसिन, १२ वर्षको कमाइ नाठोलाई खुवाईन् । श्रीमानको विच्चली ।
ईलाम घ#टनाले लियो एकाएक उग्र रुप, घ#टनाको मुख्य नाइके मुकुन्दे हो भन्दै गाउलेले पोखे आक्रोष । Ilam
सत्य बोल्न श्रीमान्को आग्रह, च्याट बाहिरीएपछि लगाए चड्कन । एकाएक चर्कीयो च्याट बिबाद । IlamNews
बुहारीलाई जेठाजूको राखे से#क्स प्रस्ताव, बाहिरी गोप्य म्यासेन्जर च्याट । गल्तीभयो भन्दै हात जोडे ।
सासूसँग रुँदै बुहारीले पोखिन गुनासो ! छोरी जसरी राखेको थियौं,के नपुगेर हाम्रो छोरालाई छोडेर गयौं ।
पोइला भागेकी श्रीमतीसँग भयो फोन सम्र्पक, श्रीमानले मानसिक तनाब धेरै दिएकाले अर्कोसँग हिडे । Ilam
जिवनले सिन्दुर भर्दा रमेश प्रसाईले आफैले पढे मन्तर, यस्तो छिन् दुलही । RameshPrasai Jeewan
खुकुरिले का#टेर मारिएका श्रीमतीका छिमेकीहरु मिडियामा, खुलाए वास्ताविकता। श्रीमान पिडामा थिए ।
यस्तो छ झापामा रचनाको घर, दशै मनाउन रचना घर आउँदा परिवारमा छायो खुसीयाली । RachanaHomeVisit
झापाका टिकटक स्टारहरुको रमाईलो भेटघाट, एकअर्काको खुलेर प्रशंसा । बिहेको कुरामा लाजले भुतुक्क ।
भाईरल कमेडिएन जुम्ल्याह दिदीबहिनी पहिलोपटक मिडियामा, अन्तवार्तामा नै भयो हात हालाहाल । Twins Sister
निल डेभिड पसेपछि फरक लुक्समा भाइरल जन्तरे मामा, एलिनासँगको गीतमा अभिनय गर्दै मामा । JantareMaMa
हामीबाट ठूलो गल्ती भयो भन्दै,रुदै मागे माफी ! आजैबाट सुध्रने प्रतिवद्धता । अन्तिम सहमती यस्तो ।
बेलुकीपख प्रहरीकोमा पुगीन् कुटाई खाने बालिका, घटनाको यस्तो छ वास्ताविकता ! हराएको छोरी म हैन् ।
अर्काको श्रीमती लिएर हराएका श्रीमान खोज्दै श्रीमती मिडियामा, परिवारको नै कारुणीक अवस्था ।
माया जालमा पारी प्रेमीले धोका दिदा, किसोरी आमा र बच्चाको बिचल्ली ! कसले देला न्याय ।
५ रुपैयाँमा खाना खुवाउँदा यी युवा बने गरिबका लागी भगवान, जुट्दैछन् सहयोगी मनहरु ।
भेटिए अर्को अनौठो जोडी – श्रीमान भन्दा ४६ वर्ष कान्छी श्रीमती । अन्तर्वातामै देखियो प्रेम ।
५ रुपैयाँमा खाना खुवाउँदा उठ्यो यति धेरै पैसा, सडक बालबालिकाको घुईंचो ! अभियान अब नरोक्ने ।
श्रीमानको मोबाईल चलाउदा सुनसरीमा श्रीमतीको रहस्यमय मृ**त्यु, यस्तो छ घटनाको वास्ताविकता ।
अशोक दर्जीको घरमा भाईको आगमन, छायो खुसीयाली ! अशोक भाईलाई भेट्न झापा आउँदै ।
हराएको गलफ्रेन्ड खोज्दै नेपालमा आए मलेशियाबाट, हातमा छ यस्तो ट्याटु ! चुप्पीले लिए सातो ।
अन्तर्वार्ता चल्दाचल्दै एकाएक रोमान्समा उत्रिए चुप्पी डन, पत्रकारलाई जुरुक्कै बोके ! ChuppiDon
बाबुछोरीले गरे उदार्णीय कार्य, १ रुपैयाँमा बस्न १० रुपैयाँमा मासू भात ! सडक बालबालिकाको घुईचो ।
स्र्टन देखाउँदा चुप्पी डनको खुट्टा नै भाचियोे, विद्यार्थीहरुको घेरामा एकाएक चुप्पी ! ChuppiDon
कृष्णदासबाट ब* लात्कृत महिला भन्छिन् , 'डिएसपी विनोद शर्माले पटक पटक मुद्दा फिर्ता लिन दवाब दिए'
प्रकाश सपुतले तताए धरान, गलबन्दीमा वृद्ध र दोहोरी ब्याटलमा युवायुवतीको घम्साघम्सी ! PrakashSaput
भावुक हुँदै घर छाडेर कहाँ गए भाइरल जोडी ! घरमा लाग्यो ताल्चा । ViralJodi
भाईरल जोडीलाई भेट्न मोवाईल लिएर पुगे चुप्पी, छायो खुसीयाली ! हाँस्दाहाँस्दै सकियो अन्तर्वार्ता ।
स्टेज कार्यकम्रमै भिटेनले सुनाए प्रहरीको अत्याचार, युवापिडिलाई यस्तो सुझाव ! देखियो लोकप्रिय क्रेज ।
रवि लामिछानेको द लिडरमा जर्ज बन्दै प्रेम संजेल ! कार्यक्रममले असल नेता जन्माउने अपेक्षा ।
श्रम कार्यालय बिराटनगरमा छड्के गर्दै ज्ञानेन्द्र शाही, १ रुपैयाँ भ्रष्टाचार नगरेको संजेलको उद्घोष !
अभियानबाट निकालिनुको षणयन्त्रको पर्दाफास, शाही नेकापाको मन्त्री बन्दै ! यस्तो छ वास्ताविकता ।
विगत सम्झेर भावुक हुँदै मिडियामा आईन् पूजा, पूर्वश्रीमान् छोड्नुको कारण यस्तो ! ViralJodi
रोमान्टिक मोड्मा भेटिए भाईरल जोडी, बास घारीमा नै पहिलो डेटिङ, चाँडै छोरा जन्माउँदै । ViralLimbuJodi
ईलाममा भेटिए अनौठो जोडी, छोरा जन्माउने यस्तो रहर ! यस्तो छ बिबाहको वास्तविकता ।
भारतको हेपाहीप्रति जंगीए जंग्गी बाबा, हिन्दीमै पठाए मोदीलाई यस्तो संन्देश । BackOfIndia
प्रेम संजेलको अफिसमा छड्के, कार्यशैली देखेर सेवाग्राही नै छक्क पर्छन् ! ठाउँका ठाउँ गुनासोमा एक्सन।
६० वर्सिय बृद्धद्वारा १७ वर्सिय बालिकाको १ वर्षदेखि करणी, फरार बृद्ध प्रहरीको खोजीमा ।
५० जनाको ग्याङ फाइटमा भागेर बाच्न सफल युवाले खुलाए नयाँ रहस्य ! छुरा कसले घोप्यो ?
सरकारको विरुद्ध खरो रुपमा उत्रिए लिलाराज, दिपक मनाङ्गे र ज्ञानेन्द्र शाहीको बारेको यस्तो टिप्पणी !
एकाएक लिलाराज खतिवडाको घरमा पुग्दा: आमा भन्नुहुन्छ- छोरो संपर्कमा छैन ! यस्तो छ वास्तविकता ।
केटा केटाको अनौठो प्रेम कहानी, समाजले छक्काको जोडि भनेर अपहेलना गर्दा मर्न मन लाग्छ ! ViralJodi
इटहरीको जनताले गरे मेयरलाई यति ठुलो सम्मान ! मेयर द्वारिकालाल भन्छन्, भ्रष्टाचारी होसियार ।
अन्ततः नयाँ बिल्डिङको बारेमा मुख खोल्न बाध्य बने मेयर ! भन्छन्, मेरो घरमा छापा मारियोओस ।
मेयर र मैले इटहरीलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने कसम खाएका छौं ! अलि आक्रमक बने मेयर । LaxmiGautam
कार्यालय फर्किए लगत्तै मेयरले गरे यस्तो निर्णय, रबिलाई हेल्मेट लगाउन सुझाव ! मनपरि गरेको आरोप ।
मेरो नाकको मुल्य किन १ करोड तोकियो ? मेयर निर्दोष छन्, सचिवालयले गलत जानकारी गरायो !
पूर्वमा भयो यमबुद्धको अर्को जन्म, ¥याप गाउन यति ठूलो सर्घष ! मनजित्ने यस्तो छ लक्ष्य । RabiKarki
अन्ततः कमलको श्रीमती आइन् मिडियामा, रिनाको मृत्यु अघि श्रीमानसगको सम्बन्धको बारेमा केही थाहा थिएन !
अन्ततः रिनाको परिवारले नै साथ दिएन भन्दै समिति आजबाट विघटन भएको घोषणा,कसले गर्‍यो राजनीति ?
रिनाको शव आज दाहसंस्कार गरियो, बहिनी तिमीलाई न्याय दिलाउन सकिन भन्दै भावुक बनिन् कविता पराजुली ।
आजफेरी पथरीमा नारा जुलुस, हत्यालाई आत्महत्यामा मोड्ने प्रयास बन्द गर्ने सुझाव ! RinaBasnet
पथरी काण्ड:- भाइरल सिसिटिभी फुटेजमा देखिएका दुई ठेलावला मिडियामा, लास हैन सब्जी बोकेको हो ।
रिना र कमल चाडै बिहे गर्ने तयारीमा थिए, श्रीमानलाई सबै कुरा थाहा थियो! मैले नै भित्रसम्म छोडेको थिए।
पथरी नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिहरुको विशेष भेला, रिना हत्या काण्डको अनुसन्धान डिएसपीले गर्ने !
महिला अधिकारकर्मीहरुको दाबी रिनाको हत्या नै भएको हो, कमल नेपाललाई प्रहरी नियन्त्रणमा लियो !
पथरी काण्ड :- रिनाको आमाबुबा भक्कानिदै छोरीको लागी न्याय माग्दै मिडियामा, दोषीले सजाए पाओस् ।
पथरी काण्ड :- रिनाको साथीहरूले खुलाए घटनाको अघिल्लो रातको नालीबेलि, आधा घण्टा कहाँ हराइन् रिना ?
राष्ट्रियताका विषयमा खरो उत्रिए रमेश प्रशाईं, भावुक हुँदै अंगालो हाले नायक दिलिप राईमाझीले । Ramesh
चर्चित लोकगायक कृष्ण कंडेलको साथमा रमेश प्रसाईको दोहोरी भिडन्त ! खरो उत्रिए रमेश ! RameshPrasai
सामुहिक आत्महत्याको १० दिनपछि छिमेकीले खुलाए अघिल्लो दिनको कुरा ! अझै सपना जस्तै भएको छ।
भरतपुरमा फेरि अर्को काण्ड, आफ्नै बाबुले गरे १३ बर्सिय छोरी बलात्कृत ! गाउलेले गरे पर्दाफास ।
मायाको भाउजुले घर छाडिन ! मर्नुअघि अघिल्लो रात मायाले भाउजुलाई यसो भनेको रहिछन् ।
खुल्यो सामुहिक आत्महत्याको रहस्य, अन्ततःभरतपुर प्रहरीले लियो मायाको श्रीमान र जेठाजुलाई हिरासतमा !
नवजात शिशुलाई खोला किनारमा फाल्ने कस्तो आमा ? प्रहरीले गर्यो उद्धार, मेयरको पहलमा उपचार हुँदै !
Exclusive| बिहे गरौं भन्दा रमिलाको हत्या ! योगेन्द्र विरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा दायर | Ramila
सरकार युद्ध चाहन्छ, प्रचण्ड उहिले मरिसके ! एनसेलको सबै टावर ध्वस्त गर्छौं - नेकपा झापा सेक्रेटरी ।
VTEN HOME VISIT। यस्तो छ भिटेनको परिवार, बुबा आमाले खोले सबै यथार्थ ! चर्चित गीत कथा उनको आफ्नै कथा
२ बर्षदेखि बाँसको खोरमा बालक, दाजु बिदेश गएदेखी बिक्षिप्त बनेका उनले गुमाए होस् ! YorishSiwakoti
रमिलाको हत्यामा योगेन्द्रसगै अरु पनि रहेको परिवारको दाबी, दोषी सार्वजनिक नगरेसम्म लास नबुझ्ने !
नेपाल र भारतको सिमानामा पर्खाल लाउनुपर्छ,पशुपतिबाट भारतीय भट्ट लखेट्नुपर्छ - पत्रकार लिलाराज खतिवडा
गीत रेकर्ड पछि धरान फर्केका हाईजिङ सुनिल भेटिए जङ्गलमा यस्तो अवस्थामा, साथमा छन् दोस्रो खजुरे !
“देशलाई बिप्लब चाहिएको छ, उनलाई प्रतिबन्ध लगाउनेहरु स्वयं युद्द पिपासु हुन्” पत्रकार लिलाराज
प्रचण्ड खासै गतिलो नेता हैइन्न, विप्लवको कार्वाही प्रचण्डले चलाएको प्रचारात्मक शैली मात्रै हो !
विप्लवलाई निषेधको राजनिती गरेमा अर्को दुर्घटना निम्त्याउँछ –कर्म पुलामी, प्रदेश नं.१ वाईसीएलअध्यक्ष
मोरङका एक वृद्धले बनाए अनेक अचम्मका बस्तु । हेर्नेहरु छ्क्क पर्छन् ।प्रतिभा देखाउन छेकेन उमेरले !
श्रीमानको दर्दानाक अवस्था, टाउकाको आधा खोपडी नै छैन् ! श्रीमती र ३ नाबालक छोरीहरुको बिचल्ली !
आमाले खोलिन सालीभेना काण्डको नालिबेली, यस्तो रहेछ वास्तविकता ! दोषी भए कार्वाही गरियोस्।
जनतामा सुरु भयो युद्धको त्रास । विप्लवको नेपाल बन्दको दिन बीच बाटोमा बम ।NepalBanda,
सीके राउतलाई गोलि ठोक्नुपर्छ,सरकारले तुरुन्त त्यो सम्झौता च्यात्नुपर्छ - रमेश प्रसाईं ! RameshPrasai
चर्चित पत्रकार ऋषी धमलाका काका भेटिए झापाको आर्यघाटमा, आखिर किन गर्छन् उनी यस्तो काम । RishiDhamala
सिके र बिप्लव बिरुद्ध गर्जिए मुकुन्द भन्छन्,सिके राउतसँग मात्रै होइन मसँग पनि वार्ता हुनुपर्छ !
दृष्टिबिहिन दम्पती भन्छन्, एकपटक छोरीहरुको अनुहार हेर्ने चाहाना छ ! मुढा बुनेर गुजारा चलाउछन् ।
Gorkhali ko chhori || गोर्खालीको छोरी || माङगेनाले गायिन राष्ट्रका लागी यस्तो गीत || Mangena Limbu
झापामा जीउँदै मानिसलाई पोस्टमार्टम गर्न लगेपछि ! पीडितको अवस्था दर्दनाक, कसले गर्ने सहयोग ?Madi
फुलन्देको आमा र काउली बुढीको दोहोरीमा पर्यो भिडन्त ! कसले मार्यो त बाजी ? Kauli Vs phulandeko aama.
काङ्ग्रेस सरकार हुँदा अमेरिका यहीँ, कम्युनिस्ट हुँदा लुट्न सके लूट कान्छा ? भन्दै कुर्लिए मुकुन्दे !
धुर्मुसको बाल्यकाल सम्झदा किन भावुक बने बुबाआमा ? Home Visit Of Dhurmush.
यस्तो पनि हुदो रहेछ, जिवित मान्छे आफ्नै चिहान खोज्दै जङ्गलमा, आखिर के हो त वास्तविकता ! SantoshLama
कृष्णलाई जस्तै सहयोग गर्दिन रमेशले गरे अनुरोध, उपचार खर्च नहूदाँ दुवै खुट्टा काटिदै ।
यो देशमा अब मेरो हुकुम चल्छ भन्दै मिडियामा आए अचम्मका ब्यक्ति ! भन्छन्,म बास्सा हु । ExtraMan
चुप्पी डनले भेटे आफ्नो डुप्लीकेटहरुलाई, एकलेअर्कोलाई हेर्दै हासेको हासै ! Duplicate of Chuppi
मोरङमा भेटिए भाइरल चुप्पी डनका दुई डुप्लिकेट ! Duplicate of viral chuppi.
ExtraMan । ४५ वर्षमा २.५ फुटका भेटिए अनौठो करोडपति काका,बोल्न सक्दैनन् तर छन् यति चलाख ।
GORE BOY मोरङमा भेटिए अचम्मका दाजुभाइ,जसको रंग मात्रै हैन व्यबहार पनि मिल्छ ! बुबा बने चकित ।
अन्ततः मेघा र बिकासबीच भयो छोडपत्र, आँसु खसाल्दै मेघाले दिइन् बिकासलाई नयाँ जिवनको शुभकामना।
सेड्रिना शर्माको घर पुग्दा खुल्यो रहस्य,भारत जानूको खास कारण खोलिन् काकीले । Sedrina Home Visit
आइए बिए पढे पनि पर्देश नगई भएन Rajesh Payal [email protected]@IA BA pade pane pardesh nagai
रामबहादुर बमजन भगवान हैनन् ! भुत भविष्य ज्योतिषले बताउने हैन्, भन्दै मिडियामा आए पुरुष माता ।
३० वर्षदेखी दाम्लोमा मोरङकी देवीमाया, ९० वर्षीय आमालाई पिरमाथी पिरैपिर ! छोराको मृत्यृ । Devimaya
अन्तर्वार्तामा नै मनोज गजुरेलको यस्तो कमेडी, फिल्म खेल्नुको रहस्यबारे मुख खोले ! ManojGajurel film
Rabi lamichhane# रबिका विरोधीलाई कडा जवाफ, प्रत्येक नेपालीले हेर्नूपर्ने रगत उम्लीने भिडियो ।
ट्रिपर आतंक ! रणभुमि बन्यो बिराटचोक, आक्रोशित स्थानियले घेरे मेयरको घर । Tripper Attanka
अरनिको पछि ललितकलाबाट बिश्वमाझ नेपाल चिनाउदै मन्जुल मितेरी, यस्तो छ हजार मुर्तिका सपनाहरू !
क्यान्सर पीडित बुबाको उपचार खर्च जुटाउन, पसिनाको धारा बगाउँदै एक किशोरी, सहयोगका लागी यस्तो अपिल !
अचम्मको जोडीको चाखलाग्दो प्रेम काहानी, पहिलो भेट्मै भयो होटलको बिल तिर्नेसम्मको कुरा !
समाजसेवी ईशा गुरुङले दिइन् मुकुन्दे र सावित्रालाई जवाफ, राष्कोट अस्पतालका यति ठूलो सहयोग ।
भूइकठहरले अझै भुलेको छैनन्, अशोकसगको त्यो रमाइलो दिनहरू ! यसरी सम्झिए अतित । Bhuikatar
रबि लामिछाने र निकिता पौडेलले गरे कोर्ट म्यारिज, यस्तो छ रबिको फेसबुक स्टार्टस।
गोरे डन र चुप्पी डनको जम्काभेट, भयो घम्साघम्सी ! कसले मार्यो त बाजी ? GoreDon VS ChuppiDon
चलचित्र रातो गलबन्दीमा खेल्दै चुप्पी डन, भङ्गेरी डनसग यस्तो छ उनको रोल ! Chuppi Don
यसरी आयो अर्कैको लास घर, आफ्नै मृत्युको प्रमाणपत्र बोकेर हिड्छन जीउँदै किरिया गरिएका सुवास ।
घना जंगलको बिचमा भेटिए अचम्मको मानिस, खान्छन् काचो मासु ! फिल्म खेल्ने रहर । MunnaVai
पुर्वका ईकुले भेटे वास्तविक ईकु, भयो रमाइलो कुराकानी । ईकु ३ मा पुर्वका ईकुले खेल्ने ।
न्यायको खोजीमा पुराना चर्चित गायक गङा बर्दान, रबि लामिछानेकोमा जाने गर्दैछन् तयारी । Ganga bardan
भूइकठहरको परिवारलाई यसरी गरियो घर हस्तान्तरण, उल्लेख्य मानिसको उपस्थिति, छायो खुशी ।
दादागिरी देखाउने चुप्पी डनलाई विष्णुले दिए यस्तो धम्की, रीसको झोकमा चुप्पीले देखाए हर्कत ।
पुर्वमा भेटिए बखत र प्रतिभाको भन्दा पनि अचम्मको जोडी, भेटेको १ हप्ता नबित्दै भयो बिहे ।
अशोक दर्जीको गृहनगरमा भेटिए अदभूत बालक, जसले बजाउछन् मादलको अनगिन्ती तालहरु, गाउँछन् मीठो गीत ।
दिपक न्यौपानेले बुझाए भूइकठहरको घर निर्माणका लागी आएको बाकी सहयोग रकम, संयोजकले दिए धन्यवाद ।
अशोक र भूइकठहरको अतित सम्झेर भावुक बनिन्,अशोकको फुपू । तिहारमा अशोकलाई टीका लगाइदिने ।
भुईकटहरको घर निर्माण तिब्र गतिमा हुँदै । संयोजक वाइबा भन्छन्, गोजिको पैसा लगाएर भएपनि पुरा गर्छू ।
अर्को वर्ष बिहे पक्का, रेखा थापासँगको सम्बन्धको खुलासा । Reality Show का बारेमा यस्तो टिप्पणी ।
मेरी बास्सैमा चक्कु डन बनेर खेल्दै पुर्वका ईकु । अनौठो कला देख्दा बल्छीधुर्बे पनि चकित परे ।।
पूर्वका ईकू देखेर तर्सिए भुइकटहरको बुबा, जाड् रक्सी नखान यसरी दिए सुझाव ।
नक्कली ईकूले खेले पहिलो म्यूजिक भिडियो, अनौठो प्रतिभा सहितको यस्तो उनको दमदार अभिनय ।
झक्कड थापाले गाए नेपाल आइडलको गीत कानमा डवल झुम्का, फिल्म खेल्न पुगे काठमाण्डौं ।
अशोकको नयाँ घरमा के के छन् सामाग्री ? काठमाण्डौंबाट आएका अनिल गुरुङले किन यसो भने अशोकको बारेमा ।
अशोक दर्जीका बुबा भावुक हुँदै घर पुजाका दिन दिए सहयोगी सबैलाई धन्यवाद, काकाले गरे यस्तो अनुरोध ?
अशोकको दोस्रो गीतमा भूइकठहरले गरे जिवन्त अभिनय । साथमा छन् प्रिन्सिपल दिपक न्यौपाने ।
दिपक न्यौपाने माथि भयो षडयन्त्र, अशोकलाई टंकले काठमाडौं पढाउने ! अडियो बारे टंकले मुख खोले ।
आखिर किन घर छाड्न बाध्य बन्यो अशोकको परिवार । भोग्नूपर्यो यस्तो सास्ती । # ashok darji
२० वर्षको उमेरमा मात्रै ३ फुट ! होचो कदका ब्यानुसोरको यस्तो छ जीवन ! # byanoshowr magar
बृद्धअबश्थामा ५ वर्षदेखी सडक किनाराको बास ! कहाँ छ सरकार ? कसले गर्छ यी बृद्धको उद्धार ?